ဂရိနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရိနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို -
အကောင်းဆုံး ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အေးဂျင့် နှင့်ရှေ့နေများ ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဂရိရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်မှု၊ ဂရိနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် dual Residency၊ , ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်မှု, ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု, ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု, ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု, ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား, ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား, နိုင်ငံသားအဖြစ်ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်, ဂရိနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂရိနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂရိနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂရိနိုင်ငံ၌နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဂရိနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ဂရိနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိသံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာများ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာနှစ်နိုင်ငံ၊ နှင့်ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 250,000
ကွဲပြားခြားနားပြီးအပြင်ပန်းကြည့်။ ကြည့်လျှင်ဂရိသည်နေပူကျဲကျဲနေသောကျွန်းများ၊ တောင်တန်းများ၊ မြို့ပြhumရိယာများနှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောဓလေ့ထုံးစံများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အေဂျီယန်ပင်လယ်၏နွေးထွေးသောဆုပ်ကိုင်မှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်၎င်းသည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသောဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်လှုပ်ခတ်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် - ၎င်းသည်ဘီစီအီးငါးရာစုသို့ပြန်သွားသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး သည်ခေတ္တတည်းခိုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်လိုသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဂရိ၌တစ်နှစ်ပတ်လုံးထူးခြားသောရာသီဥတု၊ အလယ်အလတ်သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်စီဟာစိတ်အေးအေးထားနိုင်တဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိမှုနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးမမြင်ရတဲ့နေရာတွေဟာအမြဲတမ်းဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ အေသင်၊ ကရေတေ၊ ဒယ်လ်ဖီ၊ အိုလံပစ်၊
ဂရိသည်အပန်းဖြေခရီးထွက်သည့်သံလိုက်အဖြစ်အချိန်အတော်ကြာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလုံအလောက်ကြီးမားပြီးထို့ကြောင့်သင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်“ ကောင်းကင်အစက်အပြောက်” အုပ်စုများနှင့်ဝေးကွာသွားနိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်းများ၊ ကမ်းခြေများနှင့်အကြွင်းအကျန်ဟောင်းများသည် guests ည့်သည်များနှင့်ပြည့်နေသည့်နွေရာသီအရပ်တွင်ပင်သင်လိုအပ်သောလှိမ့်ချခြင်းနှင့်နေရာအားလုံးကိုပေးသောရေဒါရေဒီယိုကန့်ကွက်မှုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး၏လူ ဦး ရေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အေသင်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနိုင်ငံ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်နေရာများစွာရှိသည်။ စတုရန်းမိုင် ၅၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အံ့သြဖွယ်ကျွန်းများစွာရှိသည်။
ဂရိ၌နေထိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေအချို့ ostracizes များအတွက်ကြိုဆိုသည်။ ဂရိသည်အလွန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးကောင်းမွန်သောလေထု၊ တိကျသောသမိုင်း၊ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုတို့ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်အီးယူတွင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။
ဂရိသည်များသောအားဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောအမှားများမရှိသလောက်ဖြစ်သည် ဥပမာအားဖြင့်မြို့ပြဒေသများ၊ အေသင်သည်နိုင်ငံ၏ကျန်ရှိသောနိုင်ငံများထက်ပိုမိုများပြားသည်ဆိုသော်ငြား၎င်းတို့သည်ဥရောပသမဂ္ဂရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ဂရိနိုင်ငံတွင်ဟောင်းနွမ်းသောစာချုပ်တစ်ခုဖြင့်နေထိုင်နေသည့်အချိန်တွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသည်။
ဂရိများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖိတ်ခေါ်၍ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ဂရိသြသဒေါက်စ်ချာ့ချ်သည်ဂရိ၏အခြေခံကျသောအပိုင်းဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဤဘာသာတရားကိုလိုက်နာကြသည်။
ဂရိနိုင်ငံတွင် Expat အဖြစ်နေထိုင်ခြင်း
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်ဂရိနိုင်ငံကိုအီးယူသို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကပြည်ပရောက်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်ရာသီဥတုကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းမတိုင်မီကဂရိသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအတော်များများဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ယခင်ဖုန်းများအနေဖြင့်ဖုန်းနှစ်လိုင်းအားနှစ်နှစ်ကျော်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ရပြီးမော်တော်ယာဉ်များကိုမကြာခဏသတိမထားမိခဲ့ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အီးယူအတွက်ကျောင်းအပ်နေ့စဉ်သိသာထင်ရှားတဲ့များအတွက်မျှော်လင့်ချက်များပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်ဤသည်ဂရိ၏အတိတ်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောသဘာဝကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါရှိမရှိ၏ဘဝ, ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ဂရိသည်ဥရောပ၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရအဓိကမဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်ဤတွင်တည်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတူညီသောအရေအတွက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အလုပ်အကိုင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဥရောပတစ်ခွင်ကွဲပြားခြားနားသောကန့်ကွက်မှုများကဲ့သို့ပင်မလွယ်ကူပါ။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အချက်များအရနိုင်ငံသည်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောအလုပ်သမားများကိုဖိတ်ကြားသည်။ ဂရိ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှုကဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဖွင့်အပိတ်များရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဤကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စဉ်းစားသူများအတွက်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကဲ့သို့အမှန်တကယ်မြင့်မားသောအလုပ်များမလုပ်မီအလုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ သေချာအောင်လုပ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ၉.၅% ။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင့်အားဤသံသရာကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်သင့်အားအရေးကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ဂရိသည်ဥရောပသမဂ္ဂမှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယူရိုငွေကြေးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဂရိရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်များသောအားဖြင့် ၃၀% သည်အခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်မတူပါ။ သို့သော်ဂရိ၏ပုံမှန်အိမ်နီးချင်းလျော်ကြေးသည်အလားတူပင်နိမ့်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဖက်ဒရယ်အငြိမ်းစားလက်ထောက်နှုန်းထားများသည်ပုံမှန်အီးယူနိုင်ငံ၏နှုန်းထားများအောက်တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အနီးအနားရှိလျော်ကြေးပေးခြင်းတွင်နေထိုင်သူများသည်အလွယ်တကူနေထိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ဂရိနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ရိုဒစ်စ်တွင်စားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းများသည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကျိုးနွံမှုရှိသဖြင့်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားဥရောပနိုင်ငံများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဂရိနိုင်ငံရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်များသည်လာမည့်ကာလ၌သိသိသာသာပိုမိုကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုအခိုင်အမာကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းလမ်းညွှန်များသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးမှလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုနှင့်လူသိများသောပြည်ပရောက်ကန့်ကွက်မှုများအတွက်နေထိုင်ရန်အခြားနည်းလမ်းများတစ်မျိုးချင်းစီပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်များမှာနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြသောဟောင်းနွမ်းသူများပါ ၀ င်သောကြောင့်အချက်အလက်များကိုအတိအကျ၊ ရှေ့ပြေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းသင်အာမခံနိုင်သည်။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဂရိနိုင်ငံ
ဗီဇာ (သို့) အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သည် ၅ နှစ်အထိဖြစ်သည်
ဂရိ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန် processing
အဘယ်ကြောင့်ဂရိ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားကြဖို့
ဥရောပတွင်ရှေးအကျဆုံးယဉ်ကျေးမှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဂရိသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့်သမိုင်းဝင်ရှုခင်းများစွာရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာသည်။ ထိုနိုင်ငံသည်အီးယူနှင့် Schengen ဇုန်၏အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်သောကြောင့်နေထိုင်သူများသည် Schengen ဇုန်ရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဥရောပရှိလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဂရိနိုင်ငံရှိခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့် to ည့်သည်များအားငှားရမ်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်မြန်ဆန်သောနေထိုင်မှုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူပြီးသင့်မိသားစုဝင်များကိုလျှောက်လွှာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သင်၏ RP ရသောအခါဂရိ၌နေထိုင်ရန်မလိုပါ။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ၂၁ နှစ်အောက်ကလေးများပါ ၀ င်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာမိသားစု ၀ င်များပါ ၀ င်ရန်အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါ။
သင်သည်ဂရိသံရုံးသို့လျှောက်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂရိရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဂရိနိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုကိုအနည်းဆုံး EUR250,000 အတွက်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ သို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူခြင်းမရှိသေးပါက Engagement Agreement ကိုတင်ပြရမည်။ လုံလောက်သောရန်ပုံငွေအထောက်အထား။ ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အလွန်မြန်လွန်းသည်။ ၁-၁.၅ လအတွင်း၊ သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ RP ကို ​​၅ နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ် ၅ ထပ်ထပ်တိုးနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ဂရိနိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြင့်အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ရန်နှင့် ၁၅ နှစ်ကြာရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်၏အိမ်ခြံမြေများကို visitors ည့်သည်များအားငှားရမ်းခြင်းအားဖြင့်ဂရိနိုင်ငံ၏တိုးတက်လာသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဂရိအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်ဂရိနိုင်ငံရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဂရိမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ခြင်းမှကန့်သတ်ထားသည်သာမကဂရိမှဖြစ်စေဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရိနိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ဂရိသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဂရိနိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဂရိနိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဂရိအတွက်, ဂရိအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ဂရိများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ဂရိများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၃၇ နိုင်ငံသို့နေထိုင်ခွင့်။
ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂရိမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဂရိနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံ ၃၇ ခုသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဂရိနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရိမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဂရိမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ဂရိနိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည်ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ သူတို့သည်ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂရိ၌အကောင်းဆုံးသောအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဂရိနိုင်ငံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဂရိ Residency
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်ဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဂရိမှသို့မဟုတ်ဂရိသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residence ကိုဂရိအတွက် Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency ကိုဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများကိုဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်တမန်တော်များနေထိုင်ခြင်းဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဂရိနိုင်ငံနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများဖြင့်နေထိုင်ရန် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ဂရိနိုင်ငံရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဂရိနှင့်ထံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဂရိနိုင်ငံရှိနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှသူလျှိုအစီအစဉ်များကိုဂရိမှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေ၊
နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဂရိ၌မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းကြသည်မဟုတ်။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဂရိအတွက် ဂရိနိုင်ငံရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂရိရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ဂရိအတွက်အထောက်အပံ့သည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဂရိ၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်သောဂရိများအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဂရိအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဂရိအတွက် ဂရိ၌ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဂရိနိုင်ငံ ဂရိနိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရပျ ဂရိနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဖောက်သည်များအတွက်ဂရိနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ဂရိမှအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဂရိဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဂရိအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဂရိနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဂရိနိုင်ငံသို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဂရိအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင့်အနေဖြင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်သင်နေထိုင်ခွင့်မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဂရိနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးဂရိအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဂရိအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျငွေတို့ပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဂရိအတွက်
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဂရိနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရိနိုင်ငံအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဂရိ၌သင်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းဖြင့်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ဂရိ၊ စီးပွားရေးနှင့်အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းဂရိနိုင်ငံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဂရိနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားနေရာတစ်ခုမှပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
ဂရိနှင့်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဂရိနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဂရိ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဂရိနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဂရိသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဂရိနိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဂရိနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဂရိနိုင်ငံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဂရိနိုင်ငံရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ဂရိနိုင်ငံကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ဂရိနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဂရိနိုင်ငံအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဂရိနိုင်ငံရှိ HR ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဂရိနိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဂရိနိုင်ငံတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဂရိနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဂရိနိုင်ငံအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဂရိနိုင်ငံအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဂရိနိုင်ငံရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဂရိနိုင်ငံ.
ဂရိနိုင်ငံတွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ဂရိနိုင်ငံတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဂရိနိုင်ငံရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂရိနိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂရိနိုင်ငံရှိ App Development
ဂရိနိုင်ငံတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency များအတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂရိအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဂရိအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဂရိတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဂရိတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဂရိနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုလက်ခံရရှိပြီးဂရိ၌နေထိုင်ခွင့်သည်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဂရိအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဂရိနိုင်ငံသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဂရိသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဂရိနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ဂရိရှေ့ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ဂရိနိုင်ငံ၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဂရိနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေထိုင်ခွင့်
ဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုဂရိစီးပွားရေး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဂရိနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ ဂရိရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဂရိရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုမှတဆင့်ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂရိမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှကူညီခြင်း ဂရိနိုင်ငံမှာ။
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
ဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂရိနိုင်ငံစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဂရိစီးပွားရေး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်ဂရိနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂရိနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဂရိ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသည့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာဂရိနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂရိနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ဂရိအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများဂရိ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဂရိအတွက်လူကြိုက်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဂရိအတွက်စျေးသက်သာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဂရိစီးပွားရေး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်ဂရိနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ဂရိနိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဂရိအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဂရိနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂရိနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂရိရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဂရိနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂရိနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဂရိနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဂရိစီးပွါးရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဂရိနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဂရိအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဂရိရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဂရိအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဂရိရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂရိရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဂရိအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂရိနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂရိနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ?
Residency အတွက်ဂရိ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက် Residency အတွက်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ဂရိရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဂရိရှိအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုဂရိနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
Residence မှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များအတွက်မြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency အတွက် Residency အတွက်ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှသာလျှင်အကြံဥာဏ်ပေးရသည်။ Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ အာဖရိကမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ဥရောပမှဂရိမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှဂရိမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှဂရိသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဂရိအတွက်
ဂရိအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
အရှေ့ပိုင်း Macedonia-Thrace ဒေသ - www.pamth.gov.gr
ဂရိ“ rebetika” သီချင်းများ
ဥရောပနယ်မြေဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များ၏အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ - www.interreg.gr
အလယ်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယား - www.pkm.gov.gr/
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောမက်ဆီဒိုးနီးယား - သရက် - www.damt.gov.gr
ဂရိ e- သတင်း
ရာသီဥတု - ဂရိဂရိမိုးလေ ၀ သဌာန
link ကိုမှ ဂရိ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန , ဂရိအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်အဘို့အမူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်